Update: Wararkii ugu dambeeyay Weerarka Hotel Elite & rasaas weli ka dhex socota | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Update: Wararkii ugu dambeeyay Weerarka Hotel Elite & rasaas weli ka dhex...
Update: Wararkii ugu dambeeyay Weerarka Hotel Elite & rasaas weli ka dhex socota
Muqdisho (Halqaran.com) – Inta la xaqiijiyay 15 qof ayaa ku dhimatay, tiro intaasi ka badanna way ku dhaawacmeen, kaddib markii qarax weerar toos ah ku bilowday oo lagu qaaday Hoteelka Elite oo ku yaalla Xeebta Liido ee magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya, in dadka ku dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay isugu jiraan dad shacab ah, saraakiil iyo shaqaale dowladeed.
Ciidamada Ammaanka ayaa soo badbaadiyay dad badan oo ay ka mid ahaayeen taliyeyaal ka tirsan xafiiska ra’iisul wasaaraha.
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah milkiilaha Hotel Elite ayaa ka mid noqday tiro dad ah oo Ciidamada Dowladda ku guuleysteen inay halkaasi ka soo badbaadiyan.
Agaasimihii xiriirka Warbaahinta maamul goboleedyada ee wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya, Daahir Cali ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhitay weerarkaasi lagu qaaday Hotelka Elite oo ku yaalla Xeebta Liido.
Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah Wasiirka Howlaha Guud ee Galmudug Axmed Washinton, Sawir qaade Maxamed Cabdi Xuseen oo ka tirsan howl wadeennada TV-ga Qaranka iyo Fanaanad Faaisa beella.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarkan hubeysan ee gelinkii dambe ee maanta lagu qaaday Hoteelka Elite oo ku yaala Xeebta Liido ee Degmada Cabdicasiis ee Waqooyiga Magaalada Muqdisho.
War ka soo baxay Al-Shabaab oo lagu baahiyay barraha afkooda ku hadla ayaa lagu sheegay in weerar is qarxin iyo mid toosba leh lagu qaaday hotel uu leeyahay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
“Mujaahidiinta ayaa camaliyad inqimaasi ah ku qaaday Hotel uu leeyahay Xildhibaan ka tirsan Dowladda Federaalka, oo ku yaal Degmada Cabdiasiis ee Magaalada Muqdisho”, Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Al-Shabaab.
Ugu dambeyn, Waxaa ilaa iyo hadda weli ka socda gudaha Hoteelka Elite oo ku yaalla Xeebta Liido dagaal u dhaxeeya ciidamada Amniga ee DF Soomaaliya iyo dableydii weerarka soo qaaday, waxaana la maqlayaa dhawaqa rasaasta.
Weerarka Hotel Elite ee Xeebta Liido